Chitatu, December 29, 2021 Chitatu, December 29, 2021 Douglas Karr
Kana iwe uri muverengi anofarira we Martech Zone, munoziva kuti ndine manzwiro akavhengana pakushambadzira kushambadzira. Maonero angu ekupesvedzera kushambadzira hakusi kuti hazvishande… ndezvekuti zvinofanirwa kuitwa uye kuteverwa nemazvo. Pane zvikonzero zvishoma nei: Kutenga Maitiro - Vanofurira vanogona kuvaka ruzivo rwemhando, asi kwete hazvo kugonesa muenzi kuti atenge. Iro idambudziko rakaoma… apo anofurira anogona kusabhadharwa zvakafanira
Chipiri, Zvita 28, 2021 Chipiri, Zvita 28, 2021 Douglas Karr
Zviteshi zvedhijitari zvinoramba zvichikura nekukurumidza, dambudziko kune vatengesi kwese kwese pavanosarudza zvekusimudzira uye kupi kwekusimudzira zvigadzirwa nemasevhisi avo online. Sezvo iwe uchitarisa kusvika kune vateereri vatsva, kune echinyakare nzira dzedhijitari senge zvinyorwa zveindasitiri uye mhinduro dzekutsvaga… asi kune zvakare vanofurira. Kushambadzira kweInfluencer kunoramba kuchikura mukuzivikanwa nekuti vapesvedzera vakanyatsokura uye kudzora vateereri vavo nevateveri nekufamba kwenguva. Vateereri vavo vakaita
Sezvo iwe uchiona analytics yesaiti yako, chinhu chimwe chaunogara uchitsvaga kuita kuwedzera shanduko yevashanyi. Zvemukati uye chiitiko chikuru chemushandisi chinogona kutyaira kubatikana pane saiti, asi izvo hazvifanire kuvhara mukaha uripo pakati pekuita uye kutyaira chaiko shanduko. Kana vanhu vachida kubatana newe pachako, uri kuvagonesa here? Isu tine vatengi vakati wandei ikozvino tiri kuita otomatiki karenda majeti uko vashanyi vanogona kuzvishandira